အမေရိကန်တွင် ဘိုးရင်း ၇၃၇ လေယာဉ်များ အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်း
NEW YORK, NY - MARCH 11: An American Airlines Boeing 737 Max 8, onaflight from Miami to New York City, prepares to land at LaGuardia Airport on Monday morning, March 11, 2019 in the Queens borough of New York City. Boeing's stock dropped more than 12 percent at the open on Monday,aday afterasecond deadly crash involving the Boeing 737 Max 8, the newest version of its most popular jetliner.(Photo by Drew Angerer/Getty Images)
ဝါရှင်တန် မတ် ၁၄
ဘိုးရင်း ၇၃၇-အမ်အေအိပ်စ်-၈ အမျိုးအစားလေယာဉ်များ၏ပျံသန်းမှုများကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံများက ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ပြီးနောက်တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ကနေဒါအပါအဝင် အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ ၎င်းအမျိုးအစားလေယာဉ်များ ပျံသန်းမှု ရပ်ဆိုင်းစေခဲ့သည်။
ပျက်ကျသွားခဲ့သည့် အီသီယိုးပီးယားလေကြောင်း လိုင်းမှ ဘိုးရင်း ၇၃၇ -အမ်အေအိပ်စ်-၈ အမျိုးအစား ခရီးသည်တင်လေယာဉ်၏ ပျံသန်းမှုအချက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် ရန်အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ယူဆောင်လာခဲ့ကြောင်း အဆိုပါသတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
အိမ်ဖြူတော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲ၌ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က အမေရိကန် ပြည်သူများနှင့် အခြားသော ပြည်သူများ ဘေးကင်းလုံခြုံ ရေးအတွက် ၎င်းအနေဖြင့် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်သောက ဖြစ်ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မတ် ၁၀ ရက်က ပျက်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့သော အီသီယိုးပီးယား လေကြောင်းလိုင်းမှ ခရီးသည်တင်လေယာဉ် ဘိုးရင်း ၇၃၇ အမ်အေအိပ်စ်-၈ အမျိုးအစား လေယာဉ်နှင့် လွန်ခဲ့ သည့်နှစ်အတွင်းက ပျက်ကျခဲ့သည့် အင်ဒိုနီးရှား လိုင်းရင်းအဲလေကြောင်းလိုင်းမှ ဘိုးရင်း ၇၃၇-အမ်အေ အိပ်စ်-၈ လေယာဉ်တို့မှ ပျက်ကျခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်း များမှာ ဆင်တူယိုးမှားနီးပါးမျှရှိသည်ကို ပြသခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
ယခုရက်သတ္တပတ်ကုန်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘိုးရင်း ၇၃၇-အမ်အေအိပ်စ်-၈ အမျိုးအစား လေယာဉ် ပျက်ကျမှုတွင် လူပေါင်း ၁၅၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
မတ် ၁၃ ရက် နှောင်းပိုင်းတွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက ဘိုးရင်း ၇၃၇-အမ်အေအိပ်စ်-၈ နှင့် ၉ အမျိုးအစား လေယာဉ်များ အသုံးပြုမှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ကနေဒါနှင့် ချီလီနိုင်ငံများက ၎င်းတို့၏လေကြောင်းပိုင်နက်များတွင် ဘိုးရင်း ၇၃၇-အမ်အေအိပ်စ်-၈ အမျိုးအစားလေယာဉ်များ ပျံသန်းမှုအား တားမြစ်ပြီးနောက်တွင် ယင်းသို့ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လေကြောင်းလိုင်းအများစုသည် ၎င်းတို့၏သဘောဆန္ဒဖြင့်ပင် ဘိုးရင်း-၇၃၇အမ်အေအိပ်စ်-၈ အမျိုးအစားလေယာဉ်များကို ပျံသန်းမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးနစ်နာကြေး ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ နီးပါး တရားစွဲသူထံ ပေးရန် ဂျွန်ဆင် ကုမ္ပဏီကို အမိန့်ချ
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးအခွပ်လွန်၍ အခွန်တွေ လွတ်နေသည်